ဂျပန်ရှိလူကုန်ကူးခြင်းရဲ့ သရုပ်မှန် (သို့မဟုတ်) ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတည်ရှိရာကျွန်း
သော 23 Oct 2020, 15:11 ညနေ
Virtual idol နဲ့အရက်အတူတူသောက်နိုင်တဲ့ခေတ်
ဂျပန်နိုင်ငံကနေ လူကုန်ကူးခံရတဲ့ ခရယူခိစံ
Corona ကာလမှာပြောင်းလဲလာတဲ့ ယာကူဇာတို့ရဲ့ပိုက်ဆံရှာနည်း ?
Kabukicho က ၁၉ နှစ်အရွယ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ကောင်မလေး
သတိထားရမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံက အလုပ်အကိုင် ！
သင်ပို့လိုက်သောပစ္စည်းကြောင့်၊ သင်ချစ်ရသူအပြစ်ပေးခံရနိုင်သည် !!
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အားသာချက်ဆိုရင် ကျေးလက်ဒေသကို အရင်ကြည့်လိုက်ပါ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် Shinzo Abe က ကျောင်းတွေအားလုံးယာယီပိတ်ဖို့ ပြောကြားခဲ့!!!
ဖြိုးပြောပြပေးတဲ့ လက်ရှိဂျပန်အခြေအနေနဲ့ ထောက်ပံ့ငွေကိစ္စ !!!
အမည်မရှိတဲ့သင်္ချိုင်းရဲ့ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၈၀၀ ကအဖြစ်ဆိုး !!!
အိုင်ဒီယာဟာ ဆိုင်၏ရောင်းအားကို ကယ်တင်သွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်…!!! အိုင်ဒီယာနှင့်ပြိုင်ရမည့်ခေတ်ဆီသို့…!!!
ယုံပါသလား? လူသားတွေဟာပြုလုပ်ခံထားရတဲ့သက်ရှိ ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့စာ ဂျပန်မှာရှိတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ချိန် ယူဆောင်ခွင့်မရှိသည့်ပစ္စည်းများ !!!
(၂၅) ရက်နေ့၊ သေဆုံးသူ ၇၄ ဦးရှိပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၂၇၆၄ ဦးရှိ !!!
Manga ရဲ့ကနဦးအစ? Katsushika Hokusai ၏လက်ရာများကို အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးနေပြီ။